Awodaayitti Woyyaaneen ijoollee Oromoo 5 ajjeestee heddu ammoo madoo taasiste - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Awodaayitti Woyyaaneen ijoollee Oromoo 5 ajjeestee heddu ammoo madoo taasiste
Guyyaa har’aa magaalaa Awodaayitti tankaarfii suukkanneessaa humni Agaazii fi kittillayyoonni isii ummata nagaa irratti fudhatteen lubbuun ijoollee Oromoo 5 dabreera. Kan madaayan ammoo heddu, akka oduun hospitaala Haramaayaa irraa baate mirkaneessitetti.
Ijjoolleen Oromoo bifa suukkanneessaa ta’ee guyyaa har’aa rasaasa Woyyaaneen harca’an: Fandishee Naasir, Saifuddiin Abdusabur Hassoo, Obsaa Yaasin, Munaa Turkii fi Firoomsaa Ahmadsaadiq dha. Kanniin ajjeefaman keessaa ijoollee umrii 9 tu keessatti argama. Kanniin wareegamaniin alatti ijoolleen madaayanis hedduudha.
Abdii Idiriis, dura taa’aan magaalaa Awodaay Ganda 02, qawwee Woyyaaneen hidhachiisteen dhiiga ijjoollee Oromoo lolaasuu isaati kan baay’inaan gabaafamaa jiru. Ummanni dallansuudhaan mana isaa ibidda nyaachisus, inni garuu kan jiru bobaa gooftota isa leenjisanii fi qawwee ittiin Oromoo ajjeesu hidhachiisaniiti.
Magaalaan Awodaayi kan jirtu dhukaasaan liqimfamtee fi humna Agaaziin dhuunfatamteeti. Akkasuu ta’ee ummanni magaalattii harka hin kennanne. Guyyaa guutuu kan oole Woyyaanee balaaleffachaa, ijjoollee dhumaniif dubbachaa fi mirga isaafis falmachaati.
Ummanni naannoo, jiraattota magaalaa haramaayaas dabalatee, ummata magaalaa Awodaay dhumaatii jala jiruuf birmachutti jiraachuu isaati kan oduun gamasii baatu addeessitu. Kanumaan wolqabatee daandiin Dirree Dhawaa fi Harariin wolqunnamsiisu cufamuun beekameera.
Guyyaa har’aa Godinni Harargee Bahaa zoonii woraanaati kan fakkaattu, akka oduu gamasii nu gayeetti. Erga Sadaasa 2015 eegalee ummanni naannoo kanaa, akkuma godinoota Oromiyaa isa biraa, gootumaan Woyyaanee afoo dhaabataati kan ture. Ajjeechaa fi doorsisaan diinaa qe’ee heddu, keessumattuu magaalaa Awodaayi, tan booyichaa fi gaddaa taasisus ummanni garuu harka hin laannne; jilbiiffatee buluudhaaf tasa hin hayyamne.
ajjeechaa Awodaayitti geggeeffame
fincila harargee bahaa
ijoollee oromoo woyyaaneen fixxe
Previous articleBaqattoonni Itoophiyaa 15 konteenarii keessatti dhumanii argaman
Next articleXiinxala haala qabatama yeroo ammaafi sadarkaa Qabsoon Bilisummaa Oromoo irra ga’e